Axmed Boqor Max'ud Boqor Muse (Boqortooyadu siyaasada ma ahan) Shir ka dhacay Qardho (DAAWO SAWIRO)
Shir si heer sare ah loosoo agaasimay oo ay kasoo qaybqaleen Nabadoono,Samadoono,aqoonyahon indheer garad iyo dhalinyarada Reer Qardho ayaa ka dhacay Hotel Alle-Aamiin Qardho Galabnimadii Axad Taariikhduna ahayd 11-06-2007.
Shirkaas oo ku bilawday jawi aad u dagan ayaa waxa lagu furay aayado qur'aan ah Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay shirka Axmed Boqor Max'ud Boqor Muuse oo halkaasi hadal dheer ka jeediyey.
Axmed Boqor Max'ud Boqor Musse oo ah Curadii Boqor Max'ud Boqor Muse ayaa waxa uu yiri waxaana uu Mahad celiyey Dhammaan ka soo qeyb galayaashii shirka isaga oo sheegay in shirkaani aay u dhan yihiin Duqayda iyo waxgaradka Beelaha kala ah:
iyo intii la degan ah oo dhan
Axmed Boqor oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa uu yiri* waxaan ka hor cadeynayaa been abuur leygu sameyay oo Idaacadaha iyo Saxaafaddu faafisay Been abuurkaas oo ah in aan dhaxalkaygii saldanada ugu tanaasulay nin kale taaso aan dhicin dhicina doonin ee layga been abuurtay , waxaan walaalayaal intiina saxaafadda maqashay leeyahay waa been abuur aan raad lahayn , Hadaan tilmaan ka bixiyo saldanada Boqortooyadda,
Boqortooyadu siyaasada ma ahan
Boqortooyadu Qabyaalad iyo awood sheegad ma ahan
Boqortooyadu Dhaqaale iyo Lacag laysku faliso ma ahan
Ka dib ayaa waxaa warqada Qoraal ah halkaas ka aqriyey Afhaynka Axmed Boqor.
C/risaaq Max'ed Dooxane oo halkaas ku soo gudbiyey Qoraal dheer oo ka turjumaya Cida Leh Dhaxalka Boqortooyada
Axmed Boqor ayaa waxaa uu halkaa ka sheegay in Saxaafadda gaar ahaan Idaacaddaha aay marar badan ku been abuurteen isaga oo sheegay in loo bahan yahay in Sida Dhabta ah looga hadlo hadaba xaalka shacabka.
Axmed ayaa waxaa uu sidoo kale yiri *walaayaal Boqortooyada daarood waa daladii isimada dhaqameedyada dhammaan umada ku hadasha Af-Soomaaliga oo dhan taas oo hoos imanayeen,
waxaa uu Axmed Boqor Max'ud yiri * Beelaha shirka ka soo qeyb galay iyo bahday Cismaan Maxamuud waxaan leeyahay bahay xaga illaah aan u hiilin illaahay haynoo hiiliyee kuligeena aan is caino isna saamaxno khaas iyo caamba al cafi wal masaabax.
Waxaan ku gaba gabeeynayaa dardaarankii Boqor Max'ud Boqor Musse igala dardaarmay iyo duriyadiisa ku abtirsata oo ku midaysan sidii boqorku kala dardaarmay Caleema saarida CURADDKA boqorka taasoo ay isku raacsan yihiin.
Waxaan u ahaa boqorka gacan yare wuxuuna boqorku igala dardaaramay daacada Illaah iyo inaan dadka u duceeyo hadii lay dulmana aan samir hiil ka dhigto wuxuu kaloo boqorku igu adkeeyay inaan umadada u xaq sooro oo aanan cidna u eexan.
Gabgabadii shirka ayaa dhammaan Ka soo qeyb galayaashii waxa aay isku raaceen in uu Axmed Boqor Yahay Boqorka Daarood isla markaana aay ayideen iskuna raaceen Nabadoona iyo waxgaradka shirka ka soo qeyb galay waxa aay kala ahayeen.
1. Nabadoon Aadan Max'ed Muse (Aadan Ciiraale)
2. Nabadoon C/Risaaq Max'ed Cismaan (Naar Alle Kaqadi)
3. Nabadoon Bashiir Faarax Yare
4. Nabadoon Cabdi Shire Max'ed
5. Nabadoon Cali Cige Faarax
6. Nabadoon Cali Faarax Dhagan
7. Nabadoon Carris Siciid Caraale
8. Nabadoon Max'ed Cali Shire
9. Nabadoon Max'ed Max'ud
10. Nabadoon Max'ed Yuusuf (Shinni)
11. Xildhibaan C/Xakiin Xaaji Cismaan
12. Suldaan C/Qaadir Max'ed
13. Ugaas Jamaal Cabdi Ducaale
14. Dr. Axmed Ciise Dheere
15. Dr.Max'ed Yusuf Max'ed
16. Eng. Faarax Muuse Siciid
17. Xasan Cabdi Gooni
18. Ag. Cali Cabdi Aw Muuse
19. C/Risaaq Max'ed Dooxane
20. Col.Xasan Max'ed Max'ud
21. Liibaan Xirsi Ibrahim
22. Max'ed Cismaan Ildab
23. Max'ed Siciid Jaamac
24. Dr.Cali Cabdi Awmuse
Isku soo wada duuboo waxaa la oran karaa shirkii Maantay ka dhacay Hotel Alle Aamiin ee uu soo qaban qaabiyey Axmed Boqor Max'ud Boqor Muse waxaa uu ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimaya isla markaana jawi dhagan ku soo dhamaaday. Iyada oo Boqorka uu halkaas ka duceyay.